Dura Taa'aa Koree Dhaabbii Dhimma Dubartootaafi Hawaasummaa Caffee Oromiyaa Kab. Dr. Dalasaa Bulchaatiin kan durfamu garichi, Aanaa Haramayaatti Gandoota sadii keessatti ijaarsa piroojektii M/B bu'uura boruu hirmaannaa ummataan qarshii mil. 10 oliin ijaaramanii tajaajila baruu fi barsiisuu kennaa jiran sadii fi rakkoo bishaan dhugaatii uummata baadiyyaa aanichaa furuuf gandoota 4 keessatti walii galaan baasii Qarshii mil 9 n 'water pump'n bishaan boollaa bahee tajaajila ummataaf kennaa jiru daaawwate.
Bulchaan Aanichaa Dr. Aaqil Usmaan garee kanaaf akka ibsanitti, walii gala akka aanaatti piroojeektiiwwan 12 keessaa 9 xumuuramanii tajaajila kennaa kan jiranii fi sadeen hafanis hanga xumura bara kanaatti hojii kan eegalan ta'uu ibsaniiru.
Itti dabaluunis rakkoowwan suphaa daandii gandoota aanichaa furuuf hawaasni aanichaa kaka'umsa mataasaatiin qarshii miliyoona 125 walitti qabuun maashinoota daandiin ittiin suphaman 3 bituun hojiilee gaariin hojjetamaa akka jiru ibsaniiru.
Piroojeektota mootummaan karoorsee hojjetuun cinaatti uummatni aanichaa fedhii misoomaaf qabu hojii qabatamaan kan agarsiiseefi hojiin gama kanaan hojjetamaa jirus kanneen biroof fakkeenyummaa kan qabu ta'uu Dr. Dalasaan ibsaniiru.
Korichi oolmaasaa har'aan, qaamolee hawaasaa waliin Yuunivarsiitii Haramayaatti kan mari'atuufi hooggansa Aanichaafis duubdeebii ni kenna
Toorbee kana 5972
Ji'a kana 84224
2008 irraa eggalee 5571500